Ny teepee Linen napetraka miaraka amin'ny matotra "Granat" - Moi Mili
Home > Ny teepee Linen napetraka miaraka amin'ny tsihy "Granat"
Ny teepee Linen napetraka miaraka amin'ny tsihy "Granat"
Teepee napetraka miaraka amin'ny tsihy "Granat"
Ny andiany Moimili "Granat" tany am-boalohany dia tolotra ho an'ny lahy sy vavy. Izy io dia ahitana: tranolay lamba amin'ny manga navy, voaravaka singa volom-borona ary lamba miloko avo roa sosona amin'ny loko mitovy. Ny fametrahantsika dia hampiasaina hilalao tsy ao an-trano ihany, fa eny an-tery na ao amin'ny zaridaina.
Ny teepee napetraka miaraka amin'ny tsipika vita amin'ny vita dia vita amin'ny fitaovana voajanahary. Noho ny fanamboarana rindrina dimy, dia miorina tsara ny tranolay rehefa sokafana, vita ny hazo, apetraka ao anaty tonelina natao tamin'ny vodiny. Fametahana matotra roa sosona feno insulation matevina dia tena tsara ho an'ny tranolay. Ny seho dia ho tonga lafatra ao an-trano, na zaridaina na tora-pasika.
Farany, ny zanatsika dia ho afaka hanana ny tontolon'izy ireo manokana, sehatra kely hanatanterahana lalao isan-karazany. Ny varavarankely iray misy varavarana lamba dia manintona. Rehefa avy milalao dia apetraho eo amin'ny fonony ny tranolay ary apetraho eo amin'ny zoro ao amin'ny efitrano. Aforeto, kely ny habeny, ary misaotra ny sarony dia afaka mora foana maka ny tranolay ianao any ivelany. Ny tsihy dia azo ampiasaina amin'ny tsipika milalao misaraka.
Ahitana lay lay ho an'ny ankizy, tsihy, hazo ary saron-damba ny kitapo. Mampirisika anao izahay hameno izany amin'ny haingo tsara tarehy sy ny kojakoja Indiana.
Lamba Teepee: 100% Len.
Lamba lamba Mat: 100% Lamba, 100% Cana miaraka amin'ny fanamarinana OEKO-TEX®.
Habe 120x120 cm, hatevina 3 cm.
Famenon-tànana fanasana ho an'ny tsihy sy teepela: hatramin'ny 30 ° C.
Fitaovana: landihazo, rongony, hazo, hazo kesika, voajanahary, eko, tsy poizina, lamba rongony, tipi voajanahary, lamba vita amin'ny landy, tranokely teepee, tipi ho an'ny ankizy iray
Default Title - PLN 649.00 PLN